Love Archives - Cele Platform
” သူတစ်ပါး အိမ်ထောင်ကို ဖြိုခွဲခဲ့တဲ့သူ (သို့) မယားငယ်တွေ ခံစားရမယ့် ပူလောင်ခြင်းဝဋ် (၅) မျိုး “…
June 6, 2019 Ko Feed 0
” သူတစ်ပါး အိမ်ထောင်ကို ဖြိုခွဲခဲ့တဲ့သူ (သို့) မယားငယ်တွေ ခံစားရမယ့် ပူလောင်ခြင်းဝဋ် (၅) မျိုး “ လောကမှာ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးနဲ့ အယုတ်ညံ့ ဆုံးလုပ်ရပ်တွေထဲမှာသူတစ်ပါးအိမ်ထောင်ကိုဖြိုခွဲတာ လည်း တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုလူတွေက ယာယီတော့ ပျော်ရွှင်ရမယ်ဒါပေမယ့်ဘယ်တော့မှ ငြိမ်းချမ်းမှု၊ ပျော်ရွှင်မှုကိုရရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး သူတစ်ပါးမိသားစုကိုဖြိုခွဲတဲ့သူတွေ၊ဖောက်ပြန်တဲ့သူ တွေခံစားရမယ့်အရာတွေကို […]
ဒါတွေပြင်ဆင်ထားရင် သင်ကြိုက်တဲ့ ကောင်မလေးကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့ သေချာသလောက်ဖြစ်နေပါပြီ
May 9, 2019 Kyaw Kyaw 0
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ချဉ်းကပ်ပြီး စကားစမပြောခင်မှာကတည်းက သူမကို ဆွဲဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ကိုယ်နေဟန် ခန္ဓာဗေဒဘာသာစကားဆိုင်ရာ လှည့်ကွက်လေးတွေ သုံးတတ်ဖို့ပဲ လိုပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် စကားတစ်လုံးမှမပြောသေးပဲ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို အထာကျကျ ကျူနိုင်ဖို့ နည်းလမ်းတစ်ချို့ရှိတယ် ဆော်ရှိပြီး သားဆိုရင်တော့ စာဖတ်နေတာ ဒီမှာတင်ရပ်လိုက်ပါ။ ၁။ ရင်ဘတ်ကိုဖွင့်ထား ပြောချင်တာက လက်ပိုက်ပြီး […]
မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ ဇနီးမယား (၇) မျိုး အကြောင်း
May 1, 2019 Ko Feed 0
မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ ဇနီးမယား (၇) မျိုး အကြောင်း မြတ်စွာဘုရားရှင် သီတင်းတော်မူတဲ့ ဇေတဝန်ကျောင်းတော်ကြီးရဲ့ ကောင်းဒါယကာ အနာထပိဏ်သူဌေးကြီး မှာ သုဇာတာ ဆိုတဲ့ ချွေးမ တစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ထို သုဇာတာ သတို့သမီး က လင်ဖြစ်သူ ရဲ့ ပြောဆိုဆုံးမမှုကို မနာခံသလို၊ ယောက္ခမဖြစ်သူ ရဲ့ ဆုံးမ […]
မိမိ၏ သမီးကို လက်ထပ်မည့်သူအား ပေါင် £240,000 မြန်မာငွေ ကျပ်သိန်း ( ၅၀၀၀ ) နီးပါး ပေးမည်ဟု ထိုင်းနိုင်ငံမှ သူဌေးကြီး ကြေငြာ..
ထိုင်းနိုင်ငံမှ မီလီယံနာလယ်ပိုင်ရှင်သူဌေးကြီးဟာ သူ၏သမီးပျိုကိုလက်ထပ်မည့်သတို့သားအား စတာလင်ပေါင် ၂၄၀၀၀၀ အပြင် သူ၏ခြံမြေတစ်ခုလုံးကိုပါပေးအပ်မည်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း၊ ချမ်ဖွန်ပြည်နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ ဒူးရင်းခြံပိုင်ရှင်ဖြစ်သူ အာနွန် ရော့ဒ်သွန် (၅၈ နှစ်) က သူ့သမီးဖြစ်သူ ခန်စီတာရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သတ်လို့ သူကိုယ်တိုင်ဖြေရှင်းသွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ မစ္စတာချမ်ဖွန်ရဲ့ကမ်းလှမ်းစာထဲမှာသူ့သမီးဟာအခုလက်ရှိမိသားစုစီးပွားရေးကိုကူညီလုပ်ကိုင်နေပီး အင်္ဂလိပ်စာနဲ့တရုတ်စာကိုလဲကောင်းကောင်းပြောဆိုနိုင်ပီး အပျိုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကိုအထူးပြုရေးသားထားပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တချို့ဒေသတွေမှာ သတို့သားဘက်ကသတို့သမီးကိုတင်တောင်းရတာတွေရှိပေမဲ့ သူကတော့ […]
“အရင်က တော့ အရမ်းချစ်တယ်ဆို” လက်ထပ်ပြီးတဲ့နောက်ကြာသောအခါ..
April 30, 2019 Ko Feed 0
“အရင်က အရမ်းချစ်တယ်ဆို” လက်ထပ်ပြီးတဲ့နောက်ကြာသောအခါ “သိပ်ချစ်ပါတယ်” ဆိုတဲ့သူက ကိုယ့်အတွက်ရန်သူ ဖြစ်လာတယ်။ အဲဒါ ဘာကြောင့်လဲ သိလာ ညီမလေး?… ဆင်ခြင်တတ်အောင် တင်ပေးပါတယ်။ ရည်းစားစကား အပြောခံတုံးက အပြောကောင်းတာကို “အဲဒါပဲ အချစ်စစ်” လို့ မခံယူပါနဲ့၊ အကြီးအကျယ် မှားသွားလိမ့်မယ်၊ ညီမလေး ….. ယောက်ကျားတစ်ယောက်ရဲ့ […]
မြင့်​မြတ်​ပြီး စိတ်​နှလုံးလှပတဲ့ အမျိုးသမီး​တွေမှာပဲရှိတဲ့ စရိုက်​ ၅ မျိုး
April 29, 2019 Kyaw Kyaw 0
ပုံပြင်တွေ၊ ရာဇဝင်တွေထဲကလို မြင့်မြတ်ပြီးနှလုံးလှတဲ့ မိန်းကလေးတွေက အပြင်မှာ တကယ်ရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အနည်းငယ်ပါပဲ။ ရှားပါးတဲ့ တန်ဖိုးကြီးတွေလိုပဲပေါ့။ သင်ဟာ ဒီအချက်အားလုံးနဲ့ မကိုက်ညီရင်တောင် တော်တော်များများနဲ့ ကိုက်ညီနေတယ်ဆိုရင် မြင့်မြတ်ပြီးနှလုံးလှတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက် ဖြစ်နေလို့ပါ။ (၁) မနာလိုစိတ်မရှိဘူး လူတော်တေ်ာများများဟာ ကိုယ့်ထက်သာရင် မနာလိုတတ်တဲ့ စိတ်ရှိကြပါတယ်။ မြင့်မြတ်တဲ့ […]
သူနာပြု ဆရာမ​လေး​တွေကို ဘဝလက်​တွဲ​ဖော်​အဖြစ်​ ဘာလို့​ရွေးခြယ်​သင့်​တာလဲ
April 28, 2019 Kyaw Kyaw 0
ဆရာဝန် ၊သူနာပြု ဆရာမလေး တွေကို ချစ်သူ တော်ထားရတဲ့ ကောင်လေးတွေဟာ ကံအကောင်းဆုံး သူတွေ ဖြစ်ကြ ပါတယ်တဲ့ ။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ သူနာပြု ဆရာမလေးတွေ ကပဲ အခုလို ဂုဏ်ပုဒ်လေးတွေ ပိုင်ဆိုင် ထားတာ ကြောင့်ပါ ။ (၁) သတ္တိ […]
ကာမပိုင်ရှိသူနဲ့ ဖောက်ပြားလျှင် ကြုံရမည့် ဒု-သ-န-သော အကြောင်း (စနိုက်ကျော်များသတိထားပါ)
April 27, 2019 Ko Feed 0
ကာမပိုင်ရှိသူနဲ့ ဖောက်ပြားလျှင် ကြုံရမည့် ဒု-သ-န-သော အကြောင်း (စနိုက်ကျော်များသတိထား) မြတ်စွာဘုရားရှင် သာဝတ္ထိပြည်၊ ဇေတ၀န် ကျောင်းတော်မှာ သီတင်းသုံးနေတော်မူချိန်က ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နေ့ သာဝတ္ထိ ပြည်ရှင် ကောသလဘုရင်ဟာ တိုင်းခန်းလှည့်လည်ရင်း မထင်မရှား ဆင်းရဲသားအမျိုးသမီး တစ်ဦးကို နှစ်သက် သဘောကျ ခဲ့ပါတယ်။ နန်းတော်ပြန်ရောက်ပြီး အဲဒီအမျိုးသမီးအကြောင်းကို […]
ကျွန်မ သားလေးတွေ သမီးလေးတွေအတွက်……အဖေခေါ်ခ တစ်ရက် ၆၀၀ ကျပ်
April 21, 2019 Ko Feed 0
ရပ်ကွက်တစ်ခုမှာ…. ကိုထွန်းနဲ့ မကြည်ပြာ ဆိုတဲ့လင်မယားသားသမီး သုံးယောက် မွေးဖွားလာကြသောအခါ။ ကိုထွန်းဟာ အရက်ကျွန်ဖြစ်သွားပြီးအရက်ကလွဲလို့….. သူ့ဘဝမှာ ဘာမှမရှိ မကြည်ပြာကိုလည်း သူဂရုမစိုက်တော့သားသမီး သုံးယောက်ကိုလဲ…. စိတ်မဝင်စားတော့ သူသိတာက…… မကြည်ပြာစီကရမယ့်….. အရက်ဖိုး မနက် ၂ဝဝနေ့လည် ၂ဝဝ နဲ့ ညနေ ၂ဝဝ ဒါပဲ…သူသိတော့တယ်… မကြည်ပြာကတော့…. […]
OG ဆရာဝန်တွေ မွေးခန်းထဲမှာကြုံရလေ့ရှိတဲ့ ဒုက္ခများ
April 19, 2019 Ko Feed 0
OGဆရာဝန်တို့ရဲ့ဒုက္ခများ ငလူး ဆာဝန်…သူပြောမှဖဲ ကိုယ်တေ လင်ယူသားမွေးတောင်မလုပ်ရဲအောင် ရှက်သဝါးဘီ…ဘယ်လောက်လှတဲ့ မိန်းမဖြစ်ဖြစ် မလှတဲ့ တစ်ချိန် ဆိုတာရှိတယ်…အဲဒါ ဘယ်အချိန်လဲ သိလား…”ကလေးမွေးတဲ့ အချိန်…” ဗိုက်ကနာ…ချွေးကပျံ…အံကကြိတ်…လူကအော်…နံကနံ နဲ့…တခါတလေဆို​ပေါင်ကြားမှာ…ညှင်းကွက်ဖင်မှာ… ဝဲခြောက်လေးတွေ ကိုယ်စီနဲ့…ဒီကြားထဲ နာလွန်းလို့ ဟိုဆွဲ ဒီဆွဲ လုပ်ရင် မတော်တရော် …ကိုယ့် လက်တွေဘာတွေ ပိတ်ဆွဲပြီး […]
ဒီဇိုင်နာ ငြိမ်းကို ကိုယ်တိုင် ဦးစီးပြီး မော်ဒယ်အမိုက်စားတွေနဲ့ ချပြမယ့် Wedding Fair ကုShow ပွဲ
ဝါဝါဝင်းရွှေရဲ့ ချစ်လှစွာသောခင်ပွန်း ဦးသန်းထွဋ် သည် မနေ့ည 7:12မိနစ်တွင် ကွယ်လွန်သွားခဲ့
ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင်ကို တစ်ကမ္ဘာလုံး ဖြန့်နိုင်ရင် ပိုကောင်းမယ်ဆိုတဲ့ ဒေါ်ဆွေဇင်ထိုက်
ငယ်ငယ်ကတည်းက ကျော်ဟိန်းကိုရူးသွပ်ပြီး ကိုယ့်စတိုင်နဲ့ကို ဖြစ်လာတာပါဆိုတဲ့ ကျော်ကျော်နန္ဒ
အနီးကပ်ရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေမှာတောင် အပြစ်ကင်းပြီး ချစ်စရာကောင်းနေတဲ့ ဟန်နာယူရီ